ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အမေရိကန် သမ္မတ နှစ်ဦး က သင်ဘယ်သူရမယ်ထင်လဲ?
အမေရိကန် သမ္မတ နှစ်ဦး က သင်ဘယ်သူရမယ်ထင်လဲ?
ဒီနေ့ အမေရိကန်တပြည်လုံး အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတော့မယ်။ လက်ရှိသမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ပြိုင်ဖက် မစ်ရော်နီတို့ အကြိတ်အနယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်ရှိ လူထုစစ်တမ်းတွေအရ သူတို့ ၂ ဦးစလုံး အပြတ်အသတ် မဖြစ်သေးပါဘူး တဲ့။
အမေရိကန်ပြည်သူတွေက သူတို့အတွက် နောက်လေးနှစ်မှာ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံး အုပ်ချုပ်မယ့်သူ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး၊ ပြည်တွင်းလူမှုရေးဘ၀တွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးမယ့်သူ၊ လုပ်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်ကိုပဲ ရွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းက နိုင်ငံသားတွေအများစုကတော့ အဲသည် စံနှုန်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး ထည့်စဉ်းစားတာ မရှိပါဘူး။
တရုတ်၊ ရုရှား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ အာရှ၊ အာဖရိကနဲ့ တောင်အမေရိကက အာဏာရှင်များနဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ အိုဘားမားရဲ့ ရှေ့ ၄ နှစ်မှာ ပိုမို ထိတွေ့ဆက်ဆံ၊ ပိုမို ဖိအားပေးဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ သွားမှာပါပဲ။ ပြီးတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ပိုမို အုပ်စုဖွဲ့စေပြီးတော့ အဆိုပါနိုင်ငံတွေကို ရင်ဆိုင်ခိုင်းမယ့် ပုံကို ဖော်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ရော်နီတို့ အစုိုးရသာ ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီရဲ့ မူလပေါ်လစီဖြစ်တဲ့ သူရဲကောင်း အာကျယ်ကြီးအဖြစ် ပြန်လည် မြင်တွေ့ကြရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးမခ http://moemaka.com/ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။